Masar oo soo bandhigtey qorshe ay ku dhexdhexaadineyso garab ka mid ah mucaaradka & dawladda Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Qaahira , July 07 – Dawladda Masar ayaa waxaa ay soo bandhigtey qorshe ay ku dooneyso waa sida ay hadalka u dhigtaye in ay ku dhex dhexaadiso mid ka mid ah garabyada ka soo horjeeda dawladda KMG ee Soomaaliya iyo dawladda.
Axmed Abul Qayth oo ah Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Masar oo kulan kula qaatey dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Oomar magaalada Al Qaahir ayaa waxaa uu u soo bandhigey qorshaha ay ku dooneyso in Masar ay ku dhex dhexaadiso garab ka tirsan Mucaaradka iyo dawladda.
Dawladda Masar ayaan waxa tafaasiil ah ka bixin qorshaheeda mana aysan sheegin sida ay ku hirgelineyso, iyo cidda ay sida gaarka ay arrintan ugala kaashaneyso waxaase jira in ay dooneyso in ay dawladda Sacuudiga ay arrintan garab ka codsato.
Muna Suleymaan oo ah Kaaliyaha Arrimaha Afrika u qaabilsan Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa waxaa ay sheegtey in Masar ay qorshahan ay ku dooneyso in dalka Sacuudiga ay ka kaashato iyada oo la isa soo hor fariisinayo mucaaradka iyo dawladda.
Waxaa ay sheegtey haweeyneyda kaaliyaha ah in dawladda Masar ay aad u daneyneyso arrimaha dalka Soomaaliya si kor loogu qaado dadaallada nabad ee dalka la doonayo in lagu xasiliyo.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee DFKMG ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Oomaar ayaa waxaa uu sidoo kale kala hadley dhiggiisa dalka Masar sidii ay Masar oga qeyb qaadan lahayd taakulo siinta DFKMG ee Soomaaliya, iyo in Masar hawlaha nabad ilaalinta iyo bad baadinta dawladda KMG ay qeyb Libaaxle ay ka qaadato.
Warar hoose oo aannu ka heleyno Wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana waXaa ay ku soo warramayaan in aysan jirin haba yarate wax ballan qaad ah oo ka yimid dhinaca Masaarida oo ku aaddan sidii gacan loo siin lahaa dawladda KMG ee Soomaaliya.
Masar ayaa inta badan lagu yaqaanney in ay dhinacyada Soomaaliya isku haya ay la soo safato dhinac ka mid ah, inkasta oo ay yareyd saammeynta ay ku yeelaneysey sanadihii ugu danbeeyey siyaasadda Soomaaliya, walowba ay jireen faro gelin ay sammeyneysey Masar waayadii ugu danbeeyey taas oo ah taageero ay siineysey kooxihii Maxkamadaha ee ka soo horjeedey DFKMG ee madaxda ka ahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullahi Yuusuf Axmed.